बिरामीको सेवा गर्न डा. गोबिन्द केसी कालिकोटमा !
३ श्रावण २०७७, शनिबार ०९:५३ प्रकाशित
तातोपानी तताएर दिएँ, त्यो पनि खानु भएन,’ उनले भनिन्, ‘बिहान कुनै पनि खानेकुरा खानु हुँदो रहेनछ ।’ डा. केसी कालीकाेट पुगेर सामान्य होटलमा बसेका छन् । कालीकाेटमा उनी लामो समय बस्ने र त्यहाँ हाड जोर्नीका बिरामीको उपचारमा संग्लन रहने छन् । उता कालीकाेटमा भने डा. केसी आएको बारे कुनै जानकारी नभएको पाइएको छ ।